तीजलाई कसरी स्पेसल बनाउँदै हुनुहुन्छ ? - केवल एक प्रश्न - प्रकाशितः भाद्र २४, २०७५ - साप्ताहिक
यसपालिको तीज त्यस्तो स्पेसल होला जस्तो छैन, किनभने तीजमा मेरो चलचित्रको सुटिङ चलिरहेको हुनेछ ।
यसपालिको तीजमा म भारतमा हुन्छु । म त्यहाँका नेपाली दिदीबहिनीहरूलाई नचाएर अनि आफू पनि सँगै नाच्दै तीजलाई स्पेसल बनाउने योजनामा छु ।
तीजकै लागि अस्ट्रेलिया तथा जापान जाँदैछु । त्यहाँका दिदी–बहिनीहरूसँग गाउँदै–नाच्दै रमाउन पाएपछि तीज आफैँ स्पेसल भैहाल्छ नि !
यसपालिको तीजलाई नाचेर, हाँसेर, गाएर, खाएर अनि नयाँ नाना लगाएर स्पेसल बनाउनेछु ।
म अस्ट्रेलियाका विभिन्न ठाउँका तीज कार्यक्रममा नेपाली दाजुभाइ–दिदीबहिनी, आमाबुबाहरूलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्दैछु ।
कल्पना कुसुम, गायिका
म यसपालिको तीजमा कोरियामा हुनेछु । यता बस्दै आएका नेपाली दिदीबहिनीहरूसँग रमाइलो गर्दै तीजलाई स्पेसल बनाउने योजनामा छु ।
मञ्जु विक, गायिका
रातो सारी लगाएर, व्रत बसेर अनि दिदीबहिनीहरूसँग भेटघाट गरेर स्पेसल बनाउनेछु ।
मनिता थापा, डिजाइनर
म यसपालिको तीजमा जापान जाँदैछु । उतै दिदीबहिनीहरूलाई नचाएर अनि आफू पनि नाचेर तीजलाई स्पेसल बनाउनेछु ।
साथीभाइ अनि आफन्तहरूसँग मन्दिर जान्छु अनि उनीहरूसँग मिलेर नाचगान गर्दै यसपालिको तीजलाई विशेष बनाउनेछु ।
रञ्जु सनम, मोडल
म यसपालिको तीजमा युरोपमा हुनेछु । त्यहाँका नेपाली दिदीबहिनी–दाजुभाइहरूसँग रमाइलो गर्दै तीजलाई स्पेसल बनाउने योजनामा छु ।
यसपालिको तीजमा व्रत नबसी स्पेसल बनाउने सोचमा छु ।
यसपालि कलेज बिदा भएपछि घर गएर तीजलाई स्पेसल बनाउने सोचमा छु ।
एक–अर्काको दु:खसुखमा साथै रहने प्रतिबद्धताका साथ सँगै दर खाएर रमाइलो गर्दै ।
एलिजा ढकाल, नेतृ, नेविसंघ
प्रवासमा भएका दिदी, बहिनी, आमाहरूसँग सेलेब्रेसन गरेर मनाउनेछु । यसपालिको तीजमा म ५/६ वटा देश पुग्दैछु ।
त्यस्तो खासै स्पेसल त छैन तर म साथीहरूसँग रमाइलो गर्नेछु ।
जाङ्मु इन शेर्पा, मोडल
यसपालि म हङकङमा भएका नेपाली दिदीबहिनीहरूसँग तीज गीत गाउँदै रमाइलो गर्नेछु ।
रूपा घर्तिमगर, गायिका
त्यस्तो खासै स्पेसल छैन, तर कार्यक्रमहरूमा व्यस्त हुन्छु ।
गायिका एवं मोडल
सबैले रातो सारी लगाएर तीजलाई स्पेसल बनाउँछन्, तर मचाहिँ नीलो सारी लगाएर तीजलाई स्पेसल बनाउने सोचमा छु ।
इष्टु कार्की, रंगकर्मी
आमा नहुने चेलीलाई तीज खासै स्पेसल नहुँदो रहेछ ।
संगीता तिमिल्सिना, गायिका
श्रीमान्को सम्मान र दीर्घायुको कामना तथा माइती र छोरी चेलीबीचको प्रगाढ सम्बन्ध नै तीजको विशेषता हो । म यसमै रमाउँदै तीज मनाउने सोचमा छु ।
दर खाएर, रातो कुर्ता–सुरुवाल लगाएर अनि आफन्त एवं साथीहरूसँग रमाइलो गरेर ।
तीज मेरा लागि सधैं स्पेसल हुन्छ । सानैदेखि आमा तीजको गीत गाउनुहुन्थ्यो । मेरो घरमा सधैं तीज विशेष कार्यक्रम हुन्थ्यो । दिदीबहिनीहरूसँग नाच्ने–गाउने गर्थें । त्यतिबेलाको तीजमा आत्मीयता थियो । पछि रेडियोमा गीत गाउन थालेपछि तीज गीतमा थप मोह बढ्यो । आजभोलि मेरो गीत तथा मेरो उपस्थितिलाई दिदीबहिनीहरूले मन पराउनुहुन्छ । यो वर्षको तीज मेरा लागि अझ विशेष छ । यो म सांसद भएपछिको पहिलो तीज हो । ममाथि जिम्मेवारी थपिएको छ । म यो वर्षको तीज हिंसामा परेका समस्त छोरी–चेलीमा समर्पित गर्छु ।
कोमल वली, सांसद तथा गायिका
जन्मथलोमा साथीभाइहरूसँग रमाइलो गरेर यसपालिको तीजलाई विशेष बनाउँदैछु ।
उषा सुवेदी, कलाकार
तीज रमाइलो पर्व हो । तीजले गर्दा परिवारका सदस्यहरूसँग भेटघाट गर्ने मौका मिल्छ । तीजको दिन शिवजीको विशेष पूजा गरिन्छ । फिल्म तथा मिडियाका साथीहरूले पनि तीजको दर खाने कार्यक्रम राख्नुहुन्छ । यसरी नै रमाइलो गरेर तीजलाई विशेष बनाउँछु ।
विगतका वर्षहरूको तुलनामा यसपटकको मेरो तीज स्पेसल भैसकेको छ । तीज आउन दुई साता बाँकी छँदै साथीहरूले दर ख्वाइसकेका छन्, तीजका उपहारहरू पनि पाइरहेकी छु । चाँडै म पनि नजिकका साथीहरूलाई दर ख्वाउँदै छु । तीजको दिन व्रत लिएर घर नजिकैको महादेवस्थान मन्दिर पुगी भगवान्को दर्शन गरेपछि यसपटकको तीज अझ स्पेसल हुने आशा लिएकी छु ।
तीजमा दर खाँदै, ख्वाउँदै अनि तीजको दिन व्रत बसेर, नाच्दै, गाउँदै, रमाइलो गर्दै स्पेसल बनाउने योजना छ।
मञ्जु कार्की पाण्डे,
तीजको नाममा विकृति आएकाले डर पनि लाग्छ । धर्मशास्त्रमा त यसरी मनाउने भनिएको छैन नि । त्यसैले भड्किलो तरिकाले नभएर धार्मिक परम्पराअनुसार तीज मनाएर यसलाई स्पेसल बनाउँछु ।
यसपटकको तीजमा मैले स्वामीज्यू गीत बजारमा ल्याएकी छु । तीजका रमाइला कार्यक्रमहरूमा त्यही गीत गाएर चेलीहरूलाई नचाउँदै यसपटकको तीजलाई स्पेसल बनाउनेछु ।
बिना भट्टराई, गायिका
आफन्त अनि साथीहरूसँग मिलेर दर खाँदै रमाइलो गर्ने सोच छ । तीजको दिन मेरो टिभी शो छ, त्यसैले उक्त शोमा तीज स्पेसल के गर्ने भन्ने पनि सोचिरहेको छु ।
पूजन थापा, मोडल